Zvigadzirwa zvekudyara muzvikwereti | Ehupfumi Zvemari
Sipanish stock market yakatengesa mamirioni e41.407 emamiriyoni muna Ndira, 6,8% kupfuura mumwedzi wapfuura uye nemwedzi wakanakisa kubvira Gumiguru, kunyangwe 18,6% yakaderera pane muna Ndira 2018. Huwandu hwekutaurirana hwakamira pa3,6, 15 mamirioni, 203% kupfuura muna Zvita. Kune rimwe divi, mari yakatengeswa muchikamu che ETF yakasvika mamirioni makumi maviri nematatu emadhora, 11,6% kupfuura muna Zvita uye 43,1% pasi pemwedzi mumwe chete wegore rapfuura. Huwandu hwenyaya dzewarandi uye zvitupa zvakabvumidzwa kutengesa zvaisvika 1.038, 209% kupfuura iwo iwo mwedzi wegore rapfuura.
Iwo musika wezvemari wakatorwa 2019 neine zita rezita rakatengeswa re49.030 mamirioni euros. Iyo ramangwana rekutengesa paIbex 35 yakawedzera 4,8% muna Ndira, asi yakadonha 4,3% zvichienzaniswa nemwedzi mumwe chete wegore rakapfuura, uye iro reMini Ibex 35 remangwana rakawedzera 9,3%, kunyangwe rakadonha 4,1% zvichienzaniswa naJanuary 2018. Vhoriyamu yakatengeswa mu ramangwana rezvikwereti rakagadziridzwa ne328,3% zvichienzaniswa nemwedzi mumwe chetewo wegore rapfuura.
Imwe dhata inoratidza zvakajeka kuti kune hupenyu hunopfuura pamusika wemasheya sezvo parizvino paine zvigadzirwa zvemari zvakawanda kwatinogona kuisa mari yedu. Nekudaro, iwe unofanirwa kunyatso chenjera navo, nekuti kunyangwe ivo vasina chepfu, vanotakura njodzi yakawandisa mukuita kwavo. Kusvika pakuti ivo vanogona kutiita kurasikirwa nechikamu chakanaka chekudyara kwakaitwa. Nechikonzero ichi, zvakakosha kuti iwe uzive izvo zvinogadzirwa zvemari izvi uye kana zvichikurudzirwa kutora chinzvimbo mune aya madhizaini ekudyara.
1 Mari: zvigadzirwa zvemari
2 Zvazvinobva pane zvigadzirwa
3 Zvibvumirano zvemangwana
4 Mvumo: kutengesa pasi uye kumusoro
5 Chinjana mari yekutengesa: yakachengeteka
6 CFD, ichipa ruzivo
Mari: zvigadzirwa zvemari
Pasina mubvunzo imwe yemhando dzekudyara dzinowanzo kuve nenjodzi uye nekudaro unofanirwa kungwarira paunenge uchivhura zvinzvimbo mavari. Mhedzisiro yemari midziyo ine kukosha kwayo kunobva pane iyo mutengo weimwe nhumbi. Icho chigadzirwa chakakodzerwa nekupinda yakashomeka misika yezvemari kune vashoma nepakati varimi. Semuenzaniso, vanogona kuve simbi dzakakosha, mbishi zvigadzirwa kana vamwe vane zvakafanana hunhu. Ivo akaomesesa nekuda kwehunhu hwavo chaihwo.
Saka kuti iwe ugone kuzvinzwisisa zvirinani, isu tinokuudza kuti kana iwe uchida kuisa mari yako inowanikwa mugoridhe, imwe yedzimwe sarudzo dzauinadzo izvozvi ndezvinobva mune zvemari zvakabatana neiyi yakakosha mari yemari. Hazvishamisi kuti sarudzo dzekudyara simbi yeyero yauinayo parizvino yakanyanya kudzvinyirirwa kupfuura mune zvimwe zviwanikwa zvemari. Kune rimwe divi, zvigadzirwa zvemari zvinokutendera iwe kuwana musika kuti kusvika makore mashoma apfuura zvaive zvisiri zvipfupi zvisingakwanisike kuvhura zvinzvimbo.
Zvazvinobva pane zvigadzirwa
Ichi chigadzirwa chakasarudzika chinovakirwa pachokwadi chekuti zvibvumirano zvakanyoreswa uye zvakagamuchirwa mukutaurirana. Ivo vanozivikanwa zvakanyanya nekuti muzviitiko zvese izvi zvibvumirano, pakati pemapato maviri, zvekutenga kana kutengeswa kweimwe huwandu hwemagetsi pane ramangwana zuva nemutengo wakatarwa. Iko, mutsauko uripakati pekuchinjanisa neramangwana kuwanda kwekugadziriswa kwemubatsiro uye kurasikirwa. Mu chinjana zvibvumirano Pundutso uye Kurasikirwa hazvigadziriswe zuva nezuva, kunyange zviine kugara nguva nenguva.
Chokwadi i yakaoma yekudyara modhi asi imwe yemari yakachengeteka yemari kunze uko panguva ino yakavakirwa. Kwete zvisina maturo, chikamu ichi chinosimbiswa seimwe yenzvimbo dzakachengeteka dzehunhu uye hunoshanda sedziviriro kubva kuzviitiko zvekusagadzikana kukuru mumisika yemakambani. Kuita senge imwe nzira ine hungwaru mukutenga nekutengesa masheya pamusika wemasheya emakambani mune ino chikamu chikamu mune hupfumi hwenyika. Kubva pane ino maonero, hazvireve kuti njodzi dzakanyanyisa mukutora zvinzvimbo.
Kana paine chigadzirwa chingave chinonakidza kwazvo kune vashoma nepakati varimi, pasina mubvunzo iyi ndeimwe yavo. Asi zvakare yakaoma kunzwisisa nekuda kwehunhu hwakakosha hunopihwa nemamiriro ayo. Zvibvumirano zvemangwana chibvumirano kana chibvumirano chinosungira mapato anobvumirana kuita kutenga kana kutengesa nhamba yakatarwa yezvinhu kana kukosha. Asi nemamiriro akakosha anogara mukuti inofanirwa kuitwa mune ramangwana zuva uye nemutengo wakasimbiswa pamberi.
Imwe yemienzaniso yakakosha ndeye ramangwana pane indices yemasheya uye inomiririra imwe nzira yekunzwisisa kudyara mumatura. misika yemari. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye izvo zvinogona kukutungamira iwe kuve nemamwe matambudziko ekuvhura nzvimbo mukirasi ino yezvakakosha zvemari zvigadzirwa. Hazvishamisi kuti izvo zvakanyorwa ndezveramangwana emastock indices ayo aya marudzi ezvibvumirano zvemari zvakabatanidzwa.
Mvumo: kutengesa pasi uye kumusoro
Ichi chigadzirwa chemari chinotakura nenjodzi zhinji mukushanda kwayo. Kwete pasina, iwe unofanirwa kuchengeta mupfungwa kuti pamwe navo unogona kuwana mari yakawanda, asi nekuda kwechikonzero chimwe chete, siya iwe ma euro mazhinji munzira. Haasi ese ma profiles emari anofanirwa kukomberedza mashandiro avo uye, chokwadika, pasi pekudzidza kwepamusoro mukufamba kwavo sezvo uchikwanisa kubhadhara zvakanyanya kubhadharisa chigadzirwa ichi kana ukasakwanise kuita zvinodiwa nemvumo. Kunyangwe ivo vakave vakakurumbira mumakore achangopfuura uye varipo mukupa kuti angangoita ese emabhangi masangano anga achivandudza.
Chero zvazvingaitika, zvibvumirano zvinobvawo mune zvigadzirwa zvemari. Asi panguva ino unogona kuzvimisikidza kuburikidza nekutenga (kufona) kana kutengesa (isa). Nguva dzose yakabatana nechero chinhu chiri pasi, chinova chinhu chinovasiyanisa kubva kune mamwe akaenzana mamodheru ekudyara. Kunge a mutengo wakatarwa mauri maunofanirwa kuita aya marudzi ekuvhiya. Kune rimwe divi, rine mukana mukuru wekuti iwe unogona kubheja pane chengetedzo, zvese kumusoro uye pasi maitiro. Mune mamwe mazwi, inoshandisirwa kune ese mamiriro angaburitswe nemisika yemari.
Chinjana mari yekutengesa: yakachengeteka
Uine chokwadi chizere chekuti iyi yekudyara modhi inozivikanwa zviri nani kwauri uye kuti iwe wakatoishandira pane imwe nguva muhupenyu hwako. Ivo vanozivikanwa zvakare se ETFs uye mubatanidzwa wezvinhu zvechivanhu mari yekudyara uye kutenga uye kutengeswa kwemasheya pamusika wemasheya. Kune rimwe divi, iri zano rinotarisirwa kutora zvinzvimbo mu zvinhu zvishoma zvinozivikanwa zvemari nevashambadzi vadiki nepakati. Asi ivo vari kutengeswa nemakomisheni ayo ari anokwikwidza kupfuura mune yakatarwa nyaya yemari yekudyara.
Mune chero e kesi yacho, ivo vanogona kusunganidzwa kune akasiyana emari zvinhu zvemarudzi ese. Semuyenzaniso, zvikamu zvekuenzana uye indices, zvigadzirwa uye kunyange simbi dzakakosha (goridhe, sirivheri, palladium, platinum, nezvimwewo). Asi uine kukosha kwakakosha uye kuti haufanire kuenda kumisika yavo yemari. Kana zvisiri, pane kudaro, iwe unogona kuvashandira kuburikidza ichi chigadzirwa, inova mari yekuchinjana-inotengeswa kana ma ETF. Ivo vakave vanozivikanwa kwazvo pakati pevashoma nepakati varimari uye nechipo chakakura nemaneja anotarisira kushambadzira ichi chakakosha chigadzirwa.
CFD, ichipa ruzivo
CFDs dzinokutendera iwe kushandisa yakakwidziridzwa yakakwira, kusvika padanho rekuti iwe unogona kuchinjana nemari yakawanda kwazvo kupfuura yako account account. Uye nekudaro, nesarudzo yekubheja pane zvese kusimuka nekudonha kwemari yemari. Chero zvazvingaitika, chigadzirwa chakaoma kunzwisisa, uye saka kubva ku CNMV inofunga kuti haina kukodzera vatengesi vekutengesa nekuda kwekuoma kwayo uye njodzi.
Mupfungwa iyi, hapana mubvunzo kuti maCFD midziyo yakaoma kunzwisisa uye inosangana nenjodzi huru yekurasikirwa nemari nekuda kwe leverage. Neichi chikonzero, hazvina kuchenjera kuvashandira kana iwe usingazive mashandiro neiyi mari yekudyara. Chekutanga pane zvese, hauzove nesarudzo kunze kwekutarisa kuti unonyatsonzwisisa here kuti chigadzirwa chemari ichi chinoshanda sei.
Asi kune rimwe divi, iwe zvakare uchafanirwa kuongorora kana iwe uchikwanisa kutora njodzi yakadai yekurasikirwa nemari yako. Nekuti kurasikirwa kwacho kunogona kuve kwakakura kwazvo uyezve kuchikwira kupfuura mune zvakajairika mhando dzekudyara. Pakupedzisira, zvichave zvakakosha kuti iwe ufungisise nezvehukama huripo pakati penjodzi dzinosanganisirwa mukuita kwako uye pamwe nekuita purofiti iwe yaunogona kuwana kuburikidza neiyi njodzi nzira yekudyara. Nekuti pakupera kwezuva iwe unofanirwa kufunga kuti imari yako wega yauri kubhejera. Uye muchinhu ichi hapana zviyero zvakakosha. Usakanganwa kudzivisa kuita zvikanganiso izvo zvinogona kubhadhara zvakanyanya mukupedzisira. Kupfuura zvaunogona kufunga kubva pakutanga. Iwe hauzove nesarudzo kunze kwekutarisa kuti unonyatsonzwisisa here kuti chigadzirwa chemari ichi chinoshanda sei.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Zvigadzirwa zvekudyara muzvikwereti